Izindaba - Lwani nobhadane ndawonye
Lwani nobhadane ndawonye
Ngobusuku bangaphambi koMkhosi Wentwasahlobo waseChina, i-COVID-19 isabalale ngodlame. Ubhadane olunjalo oluthinte wonke umuntu ludale umonakalo omkhulu ezigidini zabantu.
Kusukela kwaqubuka lesi sifo, abakwaShandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. bebenza yonke imizamo yokukhiqiza nokunikela ngamamaski, izibulali magciwane nezinye izinto. AbakwaLimeng Pharmaceutical batshale imali engaphezu kwama-yuan ayizigidi ezinhlanu ukukhulisa indawo yokusebenzela imaski yezokwelapha kanye nemishini emi-5 yemask.
NgoFebhuwari 25, u-Enhao Liu, isikhulu esiphezulu seShandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd. wanikela ngezinto zokuvikela ukubulala amagciwane nezimaski ezikhungweni eziyisikhombisa kubandakanya namajele esiFundazweni saseShandong. Phakathi kwazo, imiphongolo eyi-1 000 yemithi yokubulala amagciwane engama-84 namabhodlela ayi-1 000 ezinto zokubulala amagciwane ezinikelwe esibhedlela zizothunyelwa zisuka esibhedlela ziye eWuhan ngenhloso yokuvimbela nokulawula isimo esiwubhadane eWuhan. Kunikelwe ngamabhodlela angama-5,600 ama-84 okubulala-magciwane kanye nemigqomo eyi-1,200 yama-84 yokubulala amagciwane. Yonke into enakekelayo ikhombisa isibopho senhlangano yezomnotho seLimeng Pharmaceutical, futhi kulesi sikhathi esikhethekile, kuthathwa izinyathelo ezingokoqobo ukuxhasa umsebenzi wokuvimbela nokulawula ubhubhane.
I-Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. ibibambe iqhaza ocwaningweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwemithi yamaShayina iminyaka engama-26, futhi ibalwe njengebhizinisi lobuchwepheshe obuseJinan, iyunithi esezingeni eliphakeme eneminikelo evelele kwezokunakekelwa kwempilo imboni eSifundazweni saseShandong, ibhizinisi elihamba phambili ezingeni likamasipala eJinan ngokulandelana. Ngaphandle kwalokho, uphawu lokuhweba lomkhiqizo weLimeng lilinganiswe njengophawu lokuhweba oludumile eJinan. ILimon Pharmaceutical iyohlala inamathela kwifilosofi yebhizinisi "yamakhasimende kuqala, eqhubekela phambili", izinikele ekubeni yiphayona lokudla okunempilo, futhi inikele ekwakheni i- "Healthy Limon and Healthy China".
Ngemizamo ebambisene yokulwa nalolubhadane, sisebenza. AbakwaLimon Pharmaceutical Co., Ltd. bathathe isinyathelo sokuqala sokuzibophezela ngokubambisana kwezenhlalo, futhi bavele bahola ekulweni nalolu bhubhane. Kuhlanganyele nabantu bezwe lonke ukunqoba ubunzima, futhi kwaba negalelo ekunqobeni impi ne-COVID-19.
Isikhathi Iposi: Oct-10-2020